Dowladda Ingiriiska oo la kulantay weerar xoogan oo dhanka Internetka ah. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Ingiriiska oo la kulantay weerar xoogan oo dhanka Internetka ah.
On May 13, 2017 236 0
Kooxaha loo yaqaano Hackers ee jabsada baraha interneyada ayaa weerarkii ugu cuslaa dhawaanahan waxay ku qaadeen dowladda Ingiriiska oo kamid ah dowladaha ku faano in meel wanaagsan ay ka gaartay Technilogiyada.
Kooxdan weerarka fulisay oo illaa iyo hadda aan la aqoonsan ayaa u dhacay nidaamka shaqada ee wasaaradda caafimaadka dowladda Ingiriiska, waxaana ay isdaba marin ballaaran ay ku sameeyeen liisaskii shaqada.
waxyaabaha ay bedeleen waxaa kamid ah magacyada dadkii xanuunsanaa iyo gobollada ay ka joogaan Ingiriiska, iyagoona diiwaan geliyay dad aan xanuunsaneyn, kuwa qaarna waxay ku liis gareeyeen gobollo aysan joogin, taas oo sababtay isku dhec yaac ballaaran oo dhanka shaqada ah.
warbaahinta Ingiriiska noocyadooda kala duwan ayaa aad u hadal haya weerarkan dib u dhaca ku keenay dowladda Ingiriiska, waxaana ay la yaaban yihiin halka laga soo galay.
weerarkan waxaa sidoo kale uu saameeyey dowado badan oo dhaca qaaradda Yurub sida Spain iyo kuwa kale, kuwaas oo qudhooda la kulmay weeraro dhanka Internetka ah.
Ruushka oo isaguna kamid ah dowladaha ugu weyn caalamka ayaa weeraro lagu qaaday, waxaana ka dhashey saameyn ballaaran walow dowladda Ruushka ay beenisay in waxyeello ay soo gaartay sysmtamkeeda shaqada.
khabiir dhanka Technolgiyada ah ayaa bartiisa twitterka wuxuu kusoo qoray in uu mulaaxadeeyey koror ku yimid weerarada dhanka Internetka ah, waxaana arinta cusub ay tahay in hackerksa ay inta kaa qaataan macluumadkii kugu jiray Computerka, kadibna ay dalbadaan lacago farabadan si ay kugu soo celiyaan macluumaadka ay kaa qaateen.
dagaalka xabadda ah marka laga soo tago waxaa dunida ka socoda dagaal la xiriira xaga Technolgiyada oo u dhexeeya quwadaha kala duwan ee caalamka ka jira, waxaana dowladaha ay leeyihiin shaqaale gaar ah oo loo xil saaray iney qaadaan weeraro dhanka Internetka ah.